Henrikh Mkhitaryan oo markii lixaad ee isku xigta loo doortay xidigga sanadka waddankiisa Armenia – Gool FM
Henrikh Mkhitaryan oo markii lixaad ee isku xigta loo doortay xidigga sanadka waddankiisa Armenia
Haaruun December 21, 2016
(Yerevan) 22 Dis 2016 – Xiriirka kubadda cagta Armenia ayaa shaaciyay in Kabtanka xulka qaranka dalkaasi ee khadka dhexe uga ciyaara kooxda Manchester United ee Henrikh Mkhitaryan loo doortay xidigga sanadka waddankiisa Armenia.
Codad la tiriyay ayuu Mkhitaryan ku galay kaalinta 1-aad kaddib markii uu ku guuleystay 49/50 oo u dhiganta 245 cod.
Kaalinta 2-aad waxaa galay ciyaaryahan Ghazaryan oo u dheela kooxda Maritimu ee Bortuqiiska, waxaana uu helay 56 cod, halka kaalinta 3-aad uu galay ciyaaryahanka u safta kooxda Al Fujairah ee Imaaraadka Carabta Marcos Pizelli oo codeyntii la qaaday ka helay 45 cod.
Waa markii 6-aad ee isku xigta oo uu Mkhitaryan ku guuleysto laacibka sanadka waddankiisa Armenia, halka guud ahaan ay noqonayso markii 7-aad ee uu abaal-marintani ku guuleysto.
Sanadkii 2009 ayuu markiisii ugu horreysay ciyaaryahan Mkhitaryan jaa’isadani helay, isagoo kaddibna 6 sanadood oo isku xigta ku guuleystay abaal-marintan sanadihii 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 iyo 2016.
Barcelona oo nus darsan goolal ka badan dusha u saartay kooxda Hercules, xilli saddexleey uu saxiixay Arda Turan… + SAWIRRO
Mario Balotelli oo kaarka cas loo taagay xilli ay kooxdiisu lumisay 2-dhibcood